umhleli Modern umsindo iyamangalisa ngempela, ngoba inqubo akuzwakali kulula kuka ukubuyisela isithombe. Kodwa nakuba inkinga eyinkimbinkimbi futhi, ngoba isinqumo sawo ukuthuthukisa amathuluzi alula. Nokho, uma ukucutshungulwa isithombe, abasebenzisi abaningi bathanda Photoshop, nokungabaza umholi akudingeki, bese ukhetha umhleli umsindo kunzima kakhulu kangakanani. Kulesi ingxenye, uhla imikhiqizo ukuncintisana kuyinto ebanzi lukhulu. Isihloko sibukeza okungcono kuze kube manje.
Sony Corp., okuyinto eba umkhiqizo isethulo, waqalisa enamandla kakhulu, kodwa ngesikhathi esifanayo, ithuluzi elula ukuthi kufanelekile kokubili professional kanye Wabasaqalayo. Ngemva kokufunda izinto eziyisisekelo ukuxuba futhi lapho usukwazi ukudlala kahle usebenzisa Sound Forge ungahlela umsindo ukuze kungabi esihlukile yokuqophela.
Njengezinye abahleli eziningi, isofthiwe izocubungulwa umculo ubonisa ithrekhi lapho umsebenzi uyaqhubeka, njengoba umdwebo imvamisa. Abanolwazi, awukwazi ngisho ulalele ithrekhi ukubona lapho kukhona amaphutha kanye namaphutha.
Trump ikhadi Sound Forge
Sound Forge inikela ngamathuluzi anamandla kakhulu sokubuyiselwa umsindo. Yokutakula izici imvamisa kungenzeka usebenzisa ezihlukahlukene Equalizer esakhelwe ngaphakathi. Uhlelo has arsenal yayo cishe ama-plugin enamandla kakhulu ukususa umsindo eqoshiwe. Kuye umlingisi umsindo drowns isicelo akuyona nje kuye, futhi interpolates. Ubuchwepheshe aqalaze ezindaweni eziseduze nezinye iziteshi umsindo isampula, bese uzama ukubuyisela yasekuqaleni ekurekhodeni.
Uma yengetiwe akuzange elamukelekile, uhlelo lokucubungula umculo kuhlanganisa i-plugin Ukwehliswa komsindo. It ekuqaleni eyakhelwe sokuhlanzwa algorithm ezine isinqamu kusuka umsindo. Uhlamvu ngomsindo kunqunywa empirically. Okungukuthi, amaphuzu umsebenzisi endaweni lapho umsindo kuphela wezwa. I-Plugin uyalalela futhi sinquma impendulo isilinganiso.
Audition kusukela ku-Adobe inkampani ebibizwa Cool Hlela. Ukuqala okufushane sasheshe ukunakwa abalandeli aqondisa umsindo ngenxa high umkhiqizo. Lapho ukuthuthukiswa wathengiswa-Adobe abezindaba giant, izindaba kwamenyezelwa nje fabulous senani lokwenziwe - $ 16 million.
Amathuluzi kufakwe Audition iphakethe ephelele ngakho, futhi esibonakalayo kulula ukuzisebenzisa, abasunguli akuvamile ixazululwe ku izinguquko ezinkulu, ngokuphindaphindiwe ngokwenza ushintsho oluncane ikhodi.
Uhlelo umculo ukuqoshwa kanye processing izindlela has a uhlanzekile enamandla uqopha ukuphazamiseka. Nokho, ngokuvamile kuba ezifanele uma ingxenye umsindo spoilt umsindo eyindilinga (amasignali ukuphazamiseka). Ukwabiwa izindawo lapho ukuphazamiseka bekuzwa ngokucacile okushoyo ngaphezulu, vumela i-algorithm ukuze uqalise. Ngokuzenzakalela ukubala impendulo bese unikeza ikhambi elingcono kakhulu lale nkinga. Mangisho ukuthi ngezinye izikhathi Audition akakwazi ukubhekana ukusetshenziselwa injongo ethile. Ukuze lula umsebenzi umsebenzisi, uhlelo unekhono ukuxhuma third-party VST-plugin.
Inzuzo enkulu, eziye zaziletha umhleli umsindo phezu izimbangi - isikhombimsebenzisi yayo nge izilungiselelo nezimo. Ngaphezu kwalokho, imibono kanye yokuma amafasitela baguqulelwa ngokuzenzakalelayo umsebenzi othile. Ngokwesibonelo, uma ulwazi oludingekayo a okufakiwe ezimbalwa, uhlelo lokusebenza izobandakanya isibonisi multitrack. Uma uxhumeke kukhompyutha qapha wesibili, uhlelo eshukumisela abanye imisebenzi kanye imidvwebo kuso ukuze kube lula kakhudlwana. Audition zingathola esikrinini kanye isethi amashadi namagrafu, izilungiselelo.
Kumele kuqashelwe ukuthi le hlelo sikwazi ukucubungula umculo thwebula esingenamkhawulo zamathrekhi kanyekanye. Kungenxa yalesi sizathu, umhleli isetshenziswa DJs kanye abaculi professional.
The main, kodwa hhayi umehluko kuphela okusuka kwezinye izinhlelo ukuchwensa - cross-platform. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lokusebenza nakanjani free. Futhi abanye ochwepheshe uthanda lolu hlelo. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna uhlele ukungena kulokho yesikhulumi, uqala isicelo kanye Mac, futhi ku-Linux, futhi Windows. Ngo ukuchwensa, ungarekhoda yokululama umsindo, engeza attenuation bushelelezi noma ukubukeka noma iliphi iphuzu ithrekhi, usike ukuthula ukususa ngokuzenzakalelayo vocals ngengoma nokuningi.
Isicelo isekela izinto umsindo nge-bit-24-bit ne-imvamisa zalokho 96 kHz. Uhlelo ukubhekisiswa umculo ngesiRashiya Ungarekhoda umsindo kusuka kunoma iyiphi idivayisi yangaphandle. Futhi akusho ukuthi ucindezele inkinobho Rec, ukuchwensa izothola ngokuzenzakalela ukwanda isignali ezingeni, futhi zihlanganisa nokhetho olufunekayo.
Ngokuvamile, lapho isidingo ukusebenzisa amafayela kusuka isitoreji ezahlukene, kuba lula ulahleke kuzo, noma ulahlekelwe ngeminye imininingwane edingekayo umsindo. Ukuze ususe Esimeni esinjalo, umhleli kungenziwa amisiwe ngendlela ukuthi Ukulayisha wonke amafayela iphrojekthi kwelinye lwemibhalo.
Ongoti nezakhiwo uncompressed (ALAC, APE, FLAC, Ogg) nentshisekelo ithuluzi ezifana oscillator imvamisa impendulo. Ngemva kokubukeza ishadi akunzima ukuqonda izinga wangempela umsindo ikhodi yomthombo isampula.
Ukuchwensa ngemuva kokuqalwa lokuqala uvivinya ukusebenza PC yakho. Ngemva kokuqeda ukuhlaziywa iDemo sizobonisa amathrekhi eziningi kanjani ngesikhathi esifanayo, ungalanda ukuthi ngesikhathi kucutshungulwa ukubambezeleka babe omncane.
Luhlelo ekucubunguleni izinga umculo kungathuthukiswa ukufakwa kwezisekeli zokulalelwayo zamaqembu esithathu-add-on. Lokhu Isixazululo efanelekayo kulabo kukhona isethi esezingeni ukusebenza kwakubonakala okuncane. Okuwukuphela negative - third-party plug-ins zivame akhiwa izinkampani commercial, okusho, ngoba abaningi izengezo kufanele ukhokhe.
I program benze umsebenzi omuhle kakhulu iqhakambisa ikhodi. Uhlelo uzinzile futhi "Izimpukane" ngisho kumakhompyutha kancane ivelakancane. Ngemva kokuphothulwa isicelo ngasinye, kube isikhathi esithile aqalaze system for "trash" ukususa wonke amafayela esikhashana, asidingi yimuphi umsebenzisi noma isofthiwe.
Ukukhetha uhlelo - elula kunazo kahle, ukuxuba, ukuqopha kanye nokubuyiselwa okuqukethwe komsindo. Ukuze wenze lokhu efanele, udinga ukuqeqeshwa eside futhi wasakha ngokucophelela okukhulu. Ngaphandle kolwazi kwesofthiwe kuzosiza ukudala wobuciko. Njengoba izintambo ziyobe ziphethwe master, ngisho ithuluzi kakhulu elula uyakwazi ukubonisa wonke amandla ayo.
IMisa Effect 3 Izidingo zesistimu futhi Uhlolojikelele
Uma ibhethri igibele
Amaphuzu ngenkanyezi ezinkondlweni kanye ne-prose
U-Austin Jane (Jane Austen). UJane Austen: amanoveli, izinguqulo zeskrini
Izitayela yobuciko, izinhlobo izici zabo futhi